တရုတ် Ssangyong အန်းဒရွိုက်ကား DVD, Ssangyong ကို Android 4.4 ကား DVD, Ssangyong ကို Android 4.1 ကား DVD ထုတ်လုပ်သူ
ဖေါ်ပြချက်:Ssangyong အန်းဒရွိုက်ကား DVD,Ssangyong ကို Android 4.4 ကား DVD,Ssangyong ကို Android 4.1 ကား DVD,Ssangyong အန်းဒရွိုက်ကား DVD 5.1.1,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Ssangyong အန်းဒရွိုက်ကား DVD
Ssangyong အန်းဒရွိုက်ကား DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Ssangyong အန်းဒရွိုက်ကား DVD, Ssangyong ကို Android 4.4 ကား DVD ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Ssangyong ကို Android 4.1 ကား DVD R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Korando 2019-2020 အတွက် Android9လက်မမျက်နှာပြင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Rodius 2014 အတွက် Android ကား DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
rexton များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ကားတစ်စီးစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Actyon အားကစားဘို့ကားတစ်စီး DVD  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Tivolan 2014 ကားတစ်စီးစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Rexton 2014 မှာ Android ကားတစ်စီး DVD  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Korando 2014 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
SsangYong Tivolan 2014 သည်အန်းဒရွိုက် 7.1 ကားကို DVD Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
SsangYong Rexton 2014 သည်အန်းဒရွိုက် 7.1 ကားကို DVD Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
SsangYong Korando 2014 သည်အန်းဒရွိုက် 7.1 ကားကို DVD Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
SsangYong Actyon အားကစားသည်အန်းဒရွိုက် 7.1 ကားကို DVD Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
7.1 SsangYong Rodius 2014 သည်စနစ်ကားကို DVD Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အန်းဒရွိုက်ကား DVD Player ကို Deckless SsangYong REXTON 2014  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
SsangYong RODIUS 2014 မော်တော်ကားအသံအီလက်ထရောနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Ssangyong Korando 2014 ဟာ android ကားတစ်စီး DVD ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Ssangyong RODIUS 2014 ဟာ android ကားတစ်စီး DVD ကို navagition  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
REXTON 2014 Deckless7လက်မကားတစ်စီး DVD ကိုကစားသမား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Ssangyong REXTON 2014 Deckless များအတွက် Android ကိုကားတစ်စီး DVD ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Ssangyong Tivolan 2014 deckless ကားတစ်စီး DVD ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Ssangyong Actyon အားကစားများအတွက် Android မှာ7လက်မကားတစ်စီး DVD ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
SsangYong RODIUS 2014 မှာ Android ကားတစ်စီး DVD ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Korando 2019-2020 အတွက် Android9လက်မမျက်နှာပြင်
Rodius 2014 အတွက် Android ကား DVD player
rexton များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ကားတစ်စီးစတီရီယို မူလကားရာထူးအမည် 1.Keep: အဆိုပါ dual-ရုပ်သံလိုင်း canbus သင့်ကားတစ်စုံလင်သောလျောက်ပတ်အဖြစ်ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်, ဒီယူနစ်နှင့်သင့်ကားတစ်စီးအကြားရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးမျိုးတည်ဆောက်။...
Actyon အားကစားဘို့ကားတစ်စီး DVD
Ssangyong Actyon အားကစား 2005-2013 များအတွက် Android မှာ 8.0 ကားတစ်စီး DVD 1) ကို Android 8.0 Oreo, ရမ်: 4GB, ROM ကို: 32GB, CPU ကို: Octa-Core Processor 1.5GHz, အရည်အသွေးမြင့်ရေဒီယို IC: NXP TEF6686, ပိုကောင်းတဲ့ဧည့်ခံခဲ့သည်။ 2) Ssangyong Actyon...
Tivolan 2014 ကားတစ်စီးစတီရီယို
Ssangyong Tivolan 2014 မှာ Android 8.0 ကားတစ်စီး DVD 1) ကို Android 8.0, CPU ကို: Rockchip PX5 Octa Core, ရမ်: 4GB 2) Tivolan 2014 ကားတစ်စီး DVD ပံ့ပိုးမှုကဘလူးတုသ်ခေါ်ဆိုခ / အသံပြဇာတ်, Sync ကိုဖုန်းစာအုပ်, ပြင်ပမိုက်ကရိုဖုန်း, အ headrests...
Rexton 2014 မှာ Android ကားတစ်စီး DVD
Ssangyong Rexton 2014 မှာ Android 8.0 ကားတစ်စီး DVD 1) Ssangyong Rexton 2014 အော့ဖ်လိုင်းမြေပုံဒေတာခြင်းမရှိဘဲ Pre-install Google ကမြေပုံ () ဂျီပီအက်စ်အညွှန်း, ထောက်ပံ့ပင်ကကို USB / SD ကဒ်, သို့မဟုတ်အွန်လိုင်း Youtube ကိုဗီဒီယိုမှဗီဒီယို play, အ...
Korando 2014 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ
Ssangyong Korando 2014 မှာ Android 8.0 ကားတစ်စီး DVD 1) ကို Android 8.0, CPU ကို: Rockchip PX5 Octa Core, ရမ်: 4GB 2) Ssangyong Korando 2014 subwoofer အသံ output ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်နှင့် separately.Screen ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုထိန်းချုပ်ဖို့:...
SsangYong Tivolan 2014 သည်အန်းဒရွိုက် 7.1 ကားကို DVD Player ကို
SsangYong Tivolan 2014 သည်အန်းဒရွိုက် 7.1 ကားကို DVD Player ကို ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့ဂျပန်, ရုရှား, ယူကရိန်း, တူရကီကနေအများကြီးတန်ဖိုး clients...
SsangYong Rexton 2014 သည်အန်းဒရွိုက် 7.1 ကားကို DVD Player ကို
SsangYong Rexton 2014 သည်အန်းဒရွိုက် 7.1 ကားကို DVD Player ကို ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့ဂျပန်, ရုရှား, ယူကရိန်း, တူရကီကနေအများကြီးတန်ဖိုး clients...
SsangYong Korando 2014 သည်အန်းဒရွိုက် 7.1 ကားကို DVD Player ကို
SsangYong Korando သည်အန်းဒရွိုက် 7.1 ကားကို DVD Player ကို SsangYong Korando သည် 1.Android 7.1 ကားကို DVD Player ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
SsangYong Actyon အားကစားသည်အန်းဒရွိုက် 7.1 ကားကို DVD Player ကို
SsangYong Actyon အားကစားသည်အန်းဒရွိုက် 7.1 ကားကို DVD Player ကို android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် SsangYong Actyon အားကစားသည် 1.Android 7.1 ကားကို DVD Player ကို, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
7.1 SsangYong Rodius 2014 သည်စနစ်ကားကို DVD Player ကို
7.1 SsangYong Rodius 2014 သည်စနစ်ကားကို DVD Player ကို android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် SsangYong Rodius 2014 သည် 1.7.1 System ကိုကားကို DVD Player ကို, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
အန်းဒရွိုက်ကား DVD Player ကို Deckless SsangYong REXTON 2014
အန်းဒရွိုက်ကား DVD Player ကို Deckless SsangYong REXTON 2014 အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း 1. အန်းဒရွိုက်ကား DVD Player ကို Deckless SsangYong REXTON 2014 ၏သတ်မှတ်ချက်များနေသောခေါင်းစဉ်: မျက်နှာပြင် Pixel: * 600 1024 OS ကို: အန်းဒရွိုက် 7.1.1 စနစ်က CPU...
SsangYong RODIUS 2014 မော်တော်ကားအသံအီလက်ထရောနစ်
SsangYong RODIUS 2014 မော်တော်ကားအသံအီလက်ထရောနစ် အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း 1. SsangYong RODIUS 2014 မော်တော်ကားအသံအီလက်ထရောနစ်၏သတ်မှတ်ချက်များနေသောခေါင်းစဉ်: မျက်နှာပြင် Pixel: * 600 1024 OS ကို: အန်းဒရွိုက် 7.1.1 စနစ်က CPU ကို: Rockchip PX3 Cortex...
Ssangyong Korando 2014 ဟာ android ကားတစ်စီး DVD ကို
Ssangyong Korando 2014 ဟာ android ကားတစ်စီး DVD ကို 1. ရှန်ကျန်း Klyde အီလက်ထရောနစ် Co. , Ltd မှကျနော်တို့တရုတ်အတွက်ပထမဦးဆောင်ကုမ္ပဏီ၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏ 2007 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။...
Ssangyong RODIUS 2014 ဟာ android ကားတစ်စီး DVD ကို navagition
Ssangyong RODIUS 2014 ဟာ android ကားတစ်စီး DVD ကို navagition 1. ရှန်ကျန်း Klyde အီလက်ထရောနစ် Co. , Ltd မှကျနော်တို့တရုတ်အတွက်ပထမဦးဆောင်ကုမ္ပဏီ၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏ 2007 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။...
REXTON 2014 Deckless7လက်မကားတစ်စီး DVD ကိုကစားသမား
Ssangyong Actyon အားကစားများအတွက် Android မှာ7လက်မကားတစ်စီး DVD ကို ၏သတ်မှတ်ချက်များ 1. Ssangyong Actyon အားကစားများအတွက် Android မှာ7လက်မကားတစ်စီး DVD ကို အောက်ပါအတိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏: OS ကို: အန်းဒရွိုက် 5.1.1 စနစ် TFT drive ကို IC: Rockchip...
Ssangyong REXTON 2014 Deckless များအတွက် Android ကိုကားတစ်စီး DVD ကို
Ssangyong REXTON 2014 Deckless များအတွက် Android ကိုကားတစ်စီး DVD ကို အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း 1. Ssangyong REXTON 2014 Deckless များအတွက် Android မှာကားတစ်စီးကို DVD ၏သတ်မှတ်ချက်များနေသောခေါင်းစဉ်: OS ကို: အန်းဒရွိုက် 5.1.1 စနစ် TFT drive ကို IC:...
Ssangyong Tivolan 2014 deckless ကားတစ်စီး DVD ကို အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း 1. Ssangyong Tivolan 2014 deckless ကားတစ်စီး DVD ကို၏သတ်မှတ်ချက်များနေသောခေါင်းစဉ်: OS ကို: အန်းဒရွိုက် 5.1.1 စနစ် TFT drive ကို IC: Rockchip PX3 CPU ကို: Rockchip PX3,...
Ssangyong Actyon အားကစားများအတွက် Android မှာ7လက်မကားတစ်စီး DVD ကို
Ssangyong Actyon အားကစားများအတွက် Android မှာ7လက်မကားတစ်စီး DVD ကို အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း 1. Ssangyong Actyon အားကစားများအတွက် Android မှာ7လက်မကားတစ်စီး DVD ကို၏သတ်မှတ်ချက်များနေသောခေါင်းစဉ်: OS ကို: အန်းဒရွိုက် 5.1.1 စနစ် TFT drive ကို IC:...
SsangYong RODIUS 2014 မှာ Android ကားတစ်စီး DVD ကို
SsangYong RODIUS 2014 မှာ Android ကားတစ်စီး DVD ကို 1. ရှန်ကျန်း Klyde အီလက်ထရောနစ် Co. , Ltd မှကျနော်တို့တရုတ်အတွက်ပထမဦးဆောင်ကုမ္ပဏီ၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏ 2007 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။...
တရုတ်နိုင်ငံ Ssangyong အန်းဒရွိုက်ကား DVD ပေးသွင်း
Ssangyong ဘို့ကားတစ်စီး Navi ကစားသမားဗင်နှင့် MPV ယာဉ်များအပါအဝင်ထက်ပိုမို 1 သန်းယာဉ်များရောင်းအားစုဆောင်းခဲ့သည်။
ရေဒီယို sensitivity ကို setting ကို၏ Ssangyong ဘို့ကားတစ်စီး mp4, မြင့်မားသည်, အသံလက်ခံရရှိမည်, စားပွဲပေါ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး, ဒါပေမဲ့ sensitivity ကိုနိမ့်သည်ဆိုပါက, ကအလိုအလျောက်လက်ခံရရှိ FM ရေဒီယိုသာမန်လျှင်မူကား, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးထွက် filter နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကို manually ကိုကယျတငျနိုငျရေဒီယို၏သူ၏မေတ္တာ, ဤ function ကိုအလွန်အဆင်ပြေသည်။
ဘလူးတုသ်တိုက်ဆိုင်သည့်နှစ်လမ်းပွဲစဉ်ဖြစ်နိုင်, ဖုန်းဖြေဆိုရန်ဖြေကြားသို့မဟုတ်ကားတစ်စီးမှဖုန်းချိတ်ဆက်ရန်အတွက်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်, သင်တန်း, ဘလူးတုသ်ဂီတ function ကိုထက်လျော့နည်းသည်ကိုသင် Ssangyong ဘို့ကားတစ်စီးကိုဗီဒီယိုအားဖြင့်ဖုန်းရဲ့ဂီတကစားနိုင်ပါတယ်။
မော်ဒယ်: Ssangyong REXTON 2014, Ssangyong RODIUS 2014, Ssangyong Actyon အားကစားဘို့ကားတစ်စီးကိုဗီဒီယို 2005-2013 / Korando / 2014 2010-2013 ဘို့ကားတစ်စီး mp4, များအတွက်ကားတစ်စီး Navi ကစားသမား (အညွှန်းနှင့်အတူကားတစ်စီး DVD)
Ssangyong အန်းဒရွိုက်ကား DVD Ssangyong ကို Android 4.4 ကား DVD Ssangyong ကို Android 4.1 ကား DVD Ssangyong အန်းဒရွိုက်ကား DVD 5.1.1 kia အန်းဒရွိုက်ကား DVD